နတ်ဆိုးလေး အားကူညီကြပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နတ်ဆိုးလေး အားကူညီကြပါ
Posted by နတ်ဆိုးလေး on Mar 18, 2012 in Copy/Paste |6comments
ညွှန် ပါ လမ်း ပေး
နတ်ဆိုးလေးပုံ တွေင်တင်ချင်တာ တင်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အကို့ တို့ အမတို့ ဝိုင်းဝန်း ပြသ သင်ကြားပေးကြပါအုံးလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ကိုအံ့စာ တို့ မဖရဲ ခေါ် ကိုဖရဲ တို့ မမဆူးတို့ အားလုံးအားလုံး အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ပေးကြပါ။
မှာကြည့်အုန်းနော် အဲမှာ အံဇာတုံးရေးထားတာရှိတယ်
တစ်ချို့အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ဘာလို့လဲမသိ ပုံတွေတင်နေရင် HTML error ဆိုပြီး ပေါ်လာတယ် ပုံတင်နေတုန်းပေါ့။ ဘာလုို့လဲတော့ အကိုလဲမသိ၊ ဆိုင်ပြောင်းသုံးလိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားတယ်။
အနော်က အိမ်က သုံးတာပါ ဝါးစားတာကြီးဘဲ ခံနေရတယ်… အကုန်ဖတ်တယ်ဗျ ရဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူး ကလိတာနဲ့ အနော် top top လေးလဲ ဆိုင်ပို့ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဗျာ သေချာပြီ တခါးပေါက်ကြီး ပြန်တင်ရတော့မယ် ဟီး
ပုံတင်တာ ဘယ်လို error တွေ ဖြစ်နေတာလဲ ဆိုတာ ..
အရင်ဆုံး ပြောပြပေးပါလား ….
ဒါမှ ကိုယ်ကြုံခဲ့ဖူးတာလေးတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပြောပြလို့ ရမှာပါလို့ ….
ဒီလမ်းညွှန်ကတော့ MG သို့ ဝင်တာမကြာသေးတဲ့ ရွာသူ/သား တွေအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။
နားလည်သိပြီးသား ရွာသူ/သား များကတော့ ဖတ်စရာမလို ဟု ယူဆပါတယ်ခင်ဗျ။
Log In ၀င်ရန်
Dashboard မှာ ဘာလုပ်လို့ ရသလဲ
CubePoints ကတော့ သင် Log in ၀င်လို့ ၊စာရေးလို့ ၊ကွန်းမန့် ပေးလို့ ရထားတဲ့ ပွိုင့်တွေကို ကြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပို့ စ်တစ်ခု အသစ်တင်ရန်
ဒီလင့်ခ့် http://myanmargazette.net/wp-admin/post-new.php ကိုနှိပ်၍လဲ တိုက်ရိုက် တင်နိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ Upload တင်ရန်
ပြီးလျင် သင့်တော်ရာ ခေါင်းစဉ်တပ်၊ရေးချင်ရာရေး ပြီးရင်တော့ ညာဘက်အောက်နားမှာလဲ မိမိရေးတဲ့စာနဲ့သင့်တော်ရာ Category ကိုရွေး၊မှတ်မိလွယ်မဲ့ Tag ထည့်
ဒါဆိုလျင်တော “ဖွတ်”ကနဲဆို့သင့်ရဲ့ လက်ရာ ဂေဇတ်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။
၃) စာရေးသူအကြောင်း (About xxxxxx) အောက်နားလေးမှာ View all posts by xxxxxxx →ဆိုတာကို ကလစ်လုပ်ပြီး အဲဒီစာရေးသူတဦးထဲက ရေးခဲ့တဲ့..စာတွေအကုန် တစ်စုတစ်ဝေးထဲပြန်ဖတ်နိုင်ပါတယ်..။
၄) အပေါ်ညာဖက်ထောင့်က (Search )မှာမှတ်မိသလောက်. ခေါင်းစဉ်စာသားကို ရိုက်ထည့်ပြီး တက်လာတဲ့ပိုစ့်တွေထဲကရွေးဖတ်နိုင်ပါတယ်.. (Credit @ သဂျီး)
အထူ = အထူ
အစောင်း = အစောင်း
အထူ နောက်က စပေ့ ထားတာကို ဖျက်လိုက်ပါ..။ ကုဒ်ပေါ်အောင် စပေ့ထားပေးထားတာပါ..။(Credit @ သဂျီး)
crunching လို့ပေါ်လိုက် ၉၉ နဲ့ရပ်သွားလိုက် ၁၀၀ ပြည့်ပြီး ပုံမပေါ်လိုက်နဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ မသိပါဘူးကိုအံစာရယ် ပြီးတော့ ဘယ်လိုအချိန်မှာ ပုံနှိပ်ရမလဲ ဆိုတာက မသိဘူးဖြစ်နေတာ ကျိုက်ထီးရိုးပုံ ကို ရမ်းထုတ်လိုက်တာ ရသွားတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အသေးစိတ်သိချင်ပါသေးတယ်။
ကွန်များ နှေးလွန်းနေလို့လားများဗျာ …
Crunching ကို ၁၀၀ အထိ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် ပုံကတော့ ဆိုက်ပေါ်ကို တက်သွားတာ သေချာပါတယ် …။
ဆိုက်ပေါ်မှာ တက်သွားတဲ့ ပုံတွေကိုတော့ …
ပုံတင်နဲ့ နေရာမှာ Media Library ဆိုတာ ရှိပါတယ် .. From URL ရဲ့ ဘေးနားမှာပါ …။
အဲဒါလေးကို နှိပ်ပြီး အဲဒီ ထဲမှာ စောစောက ကိုယ် upload တင်ထားတဲ့ ပုံကို ပြန်ရှာပြီး အဲဒီ ပုံကို edit လုပ်၊ ပြန်တင် လိုက်ပါဗျာ ….
အဲထဲ ပုံရှာတဲ့ အခါမှာလည်း ကိုယ် upload တင်ထားတဲ့ ပုံက အပေါ်နားမှာ ရှိနေတာက များပါတယ် …။
အပေါ်နား မပေါ်ဘူး ဆိုရင်တော့ ပုံကို ပေးထားတဲ့ နာမည်အတိုင်း လိုက်ရှာပြီး တင်လိုက်ပါလို့ …။
ဒီနေ့ ကလိမိသမျှ ဆိုတဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ …
“ဒါကတော့ ကျနော်တို့ ဂေဇက်မှာ ရှိပြီးသား ပုံတွေကို တင်ချင်တဲ့အခါ သုံးနိုင်ပါတယ်။”
အဲဒီ ပုံလေးမှာ နမူနာ အနေနဲ့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့ …
အဆင် မပြေခဲ့ဘူး ဆိုရင်လည်း ထပ်ပြောပေါ့ဗျာ …
တတ်သလောက်တော့ ကူညီရမှာပေါ့ .. နော့ …